Xuquuqda Shaqada:Dhibnayaasha Rabshadaha iyo Qashqashaadda | LawHelp Minnesota
Xuquuqda Shaqada:Dhibnayaasha Rabshadaha iyo Qashqashaadda (PDF)292.3 KB
Takoorida iyo Khashkhashaadaha Goobta Shaqada
Amarka Amaan Helida (OFP) ee dhanka ka ah Dagaalka Qoyska Dhexdiisa ah – Adigu iskaa u sameyso
Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa helida ka fasaxid shaqadda ah hadii ay ku haystaan arrimo la xiriira dagaal iyo khashkhashaad.
Shaqada fasax ma ka qaadan karaa iyadoo sababtu tahay dagaal ama khashkhashaad?
Haddii adiga ama qof qoyskaaga ka mid ah lagu xadgudbo ama la faduuliyo ama haddii adiga ama qof aad kuugu dhow oo qoyskaaga ka mid ah uu yahay dhibane dambi dhacay, waxaad shaqada ka qaadan kartaa waqti fasax ah:
Si aad u hesho amarka kala badbaadinta (OFP), ama amarka Kala Fogeynta (HRO).
Ina aad ka qeyb qaadato dhegaysiga maxkamadda
In aad ka markhaati noqoto dambi dhacay, haddii lagu weydiisto in goobta maxkamada aad markhaati furto.
Loo shaqeeyaha waa in uu ku siiyaa waqti fasax ah, laakiin kuma khasbana fasax lacag kuu socoto.
Fiiri xogta urursan Amarka Amaan Helida iyo Amarka Khashkhashaada
Loo shaqeeyaha kuma ruqsayn karo, kuma handadi karo, kugulama kici karo wax heybsooc ah noocay doonto ha ahaatee, sabatoo ah fasaxa waxaad u qaadatay wax macquul ah si aad u hesho amar kala badbaadin (OFP) iyo amak kala foeynta (HRO). Loo shaqeeyuhu kuma ciqaabi karo asagoo hoos u dhigaya mushahaarkaaga, ama shaqadaada wax ka bedelaya, sababtoo ah ma jecla in aad fasax qaadatid.
Sidee ugu sheegaa loo shaqeeyaha ( cidda aan u shaqeeyo) in aan maqnaan doono?
Haddi aad awoodid, wargeli loo shaqeeyaha ugu yaraan 48 saacadood oo ogysiin ah ka hor inta aadan shaqada ka maqnaan. Haddii aysan suura gal ahayn oo sugitaanku ay adiga iyo caruurtaada dhibaato u keenayso, markaas looma baahna in aad ogaysiin siiso. Loo shaqeeyahaagu wuxuu ku weydiin karaa caddayn waxa aad ku maqnayd, iyo waxa aad samaynaysay, laakiin waa in ay macluumaadkaas ay ka dhigaan qarsoodi (khaas ah).
Mushahar ma la i siinaya haddii aan shaqada ka maqnaado?
Haddii aad ka shaqaysid Minneapolis ama St. Paul oo loo shaqeeyahaaga ay u shaqeeyaan wax ka badan 6 qof oo shaqaale ah, waxaa lagu siinayaa fasax ku maqnaansho bukaan iyo sharciga maqnaanshaha nabadgelyada. Waxaad maqnaanshahaas u isticmaali kartaa in aad ku doonato gargaar xagga fulinta sharciga, in aad hesho la talin, iyo adeegyada kale ee la xiriira xadgudubyada qoyska ka dhex dhaca, ama galmoodka khasabka ah, ama dhib kaaga timid daba gal lagugu faduulinayo adiga ama qof qoyska ka mid ah oo aadan sheegayn.
Haddii aadan ka shaqayn Minneapolis ama St. Paul, sharrciga Minnesota wuxuu qabaa in loo shaqeeyuhu u ogolaado in shaqaalaha ay isticmaalaan fasaxooda kaydka u ah si ay u raadsadaan mucaawino xagga fulinta sharciga, u helaan la talin, iyo adeegyada kale ee la xiriira xadgudubyada qoyska ka dhex dhaca, ama galmoodka khasabka ah, ama dhib kaaga timi daba gal lagugu faduulinayo adiga ama qof qoyska ka mid ah oo aadan sheegayn. Sharcigaan ayaa ku daboolaya haddii aad shaqada haysay ugu yaraan 12 bilood oo aad ugu yaraan shaqaynaysay waqtiga barkiis.
Xubnaha qoyska ee sharcigaani daboolayo waxaa ka mid ah caruurta, xaaska, walaalaha, waalidka, soddogga ama sodohda, ilmaha awoowe ama ayeeyo loo yahay, iyo adeeraa hooyo/aayadaa
Haddii aan loo shaqeeyuhu lahayn nidaamka mushahaar bixinta bukaan ku maqnaansho, kuma aha waajib in ay ku siiyaan mushahaar inta aad maqnayd. Laakiin haddii aad tahay dhibane dambi, waxaa laga yaabaa in aad mucaawimo ka heshid Guddiga Minnesota ee Magdhowga dhibanayaasha Dambiga.
Guddiga Magdhowga Dhibanayaasha Dambiga ee Minnesota
Waxa aad codsan kartaa caawinaad haddii ugu yaraan ay kaa baaqatay mushahar le’eg $50 ay sabab u tahay xaaladaan kugu dhacday. Tan waxaa ku jira mushaharka kaa baaqday. Si aad u codsato, waa in aad ku wargelisay booliska 30 maalmood gudohood marka ay wax dheceen, waa in aad la shaqaysaa baaritaanka iyo dambi ku oogidda , waana in aad xeraysaa dacwad 3 sanno gudohood.
Haddii aad rabto macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan magdhowga ama foomamka codsiyada, la xiriir:
(Guddiga Magdhowga dhibanayaasha Dambi ee Minnesota)
1 (888) 622-8799 or (651) 201-7300
Maxaan sameeyaa haddii loo shaqeeyaha uu shaqada iga eryo?
La xiriir gar yaqaan kaaga. Loo shaqeeyahaagu wuxuu la kulmi karaa ciqaab dambiyeed, haddii uu shaqada kaaga eryay ama kuu ciaabay sabab la xiriirta xaaladda ku qabsatay. Waxaa kuu suurtoobi karata in aad dacweyso loo shaqeeyaha si aad u hesho mushahaarkii kaa baaqday, wixii waxyeelo ah ee ku gaaray, iyo in shaqadaadi lagugu celiyo. Waxaa kaloo suurta gal ah in loo shaqeeyuhu uu bixiyo khrajka garyaqaanka.
Ma heli cemiska dadka shaqo la’aanta ah haddii aan shaqadayda uga tego dagaalka qoyska dhex mara ?
Haa. Waad heli kartaa lacagta dadka shaqo la’aantu ku dhacday haddii aad rabtid in aad shaqada uga tagtid sababo la xiriira rabshadaha dagaalka leh ee qoyska ka dhex dhaca, xadgudubka galmoodka ama qashqashaad laguu geystay ama qof aad kuugu dhow oo qoyskaaga ka mid ah. “Qof aad kuugu dhow oo qoyskaaga ka mid ah “, waxaa ku jira labada isu dhaxda, waalidka, adeerka/aayada, awoowe/ayeeyo, wiilkaaga, gabadhaada, wiilka adeerka hooyo, gabadha adeer hooyo, wiilka ama gabadha aad awoowe ama ayeeyo u tahay.
Haddii aad u baahan tahay caddayn in ay kugu timid rabshado dagaal wata oo qoyska ka dhex dhacday, galmo Khasab ah, ama daba gal. Caddayntaas waxaa ka mid noqon kara:
Amar maxkamadeed ee kala badbaadin ama xakamyn faduul(OFP ama HRO)
Warbixinta booliska ee caddaynaysa xadgudubka
Caddayn in qofka xadgudubka ku kacay lagu xukumay xadgudubka.
Dukumeenti caafimaad oo caddaynaya xadgudubka
Warbixin qoraal ah oo uu bixiyay shaqaalaha bulshada, qof ka mid ah wadaadada diinta, qof ka shaqeeya hoyga dadweynaha, garyaqaan, ama qof xirfadle ah oo ku caawimay. Warbixintu waa in ay sheegaysaa in adiga ama qof ka mid ah qoyskaaga in uu dhibame u yahay rabshado dagaal wata ee qoys ka dhex dhacay, galmo Khasab ah, iyo daba gal.